एमाले Archives - Dabali Khabar | डबली खबर एमाले Archives - Dabali Khabar | डबली खबर
काठमाडौँ/नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज बसेको पार्टी सचिवालयको पहिलो बैठकले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरुको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको हो । यो अनुमोदनसँगै पार्टीको ४४१ केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छ । त्यसैगरी यस बैठकले पार्टीको संगठन एकीकरणका लागि अन्तरिम विधानको अधीनमा रही नियमावली मस्यौदा गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको छ । उक्त कमिटीमा पार्टीका नेताहरु देव गुरुङ, बेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहने पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, बैठकले सातवटा प्रदेश…
डबली खबर २०७५ जेठ २ मा प्रकाशित
काठमाडौँ/पार्टी एकताको कार्यसूचीमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बिहीबार आकस्मिक रुपमा बैठक बस्ने भएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकताको विषयलाई लिएर आकस्मिक रुपमा बिहीबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने तय भएको पार्टी कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टी एकताको विषयमा विभिन्न खालका टीका/टिप्पणी आइरहेको बेला पार्टी एकता गर्न कै लागि केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्नेछ । पार्टी एकताको मिति घोषणा गर्ने कमिटीको सम्भवतः त्यो अन्तिम बैठक पनि हुन सक्ने जनाएको छ…
पार्टी एकताबाट कोही भाग्न सक्दैन: पोखरेल
काठमाडौँ / रक्षामन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताबाट आफ्नो पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) उम्कन नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनले आज आयोजना गरेको ‘वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र मुस्लिम समुदायको अधिकार’ विषयको विचार गोष्ठी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एकताबारे कुनै अन्योलमा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । मिलाउन पर्ने सबै विषय मिलाएर निकट भविष्यमा औपचारिक रुपमा पार्टी एकताको घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो । “हामी शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्त र संगठनको संरचनामा आधारित पार्टी हौँ । यही आधारमा एकतामा जानुपर्छ…
काठमाडौँ, ३ वैशाख/ नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटीको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतालाई सकेसम्म यही वैशाख ९ गते नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दुई पार्टीले गठन गरेका संगठन र वैचारिक कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेको र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस (वैशाख ९) मा एकता गर्न सुझाइएको सन्दर्भमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार एकताका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी पूरा गरेर ढिलो नगरी एकता घोषणा गर्नुपर्ने नेताहरुको जोड रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज दिनभर अन्य कार्यक्रम…
एमाले र माओवादीका नेताहरू यसरी बन्दै छन् ‘सडकछाप’ काङ्ग्रेस कार्यकर्ता पनि त्रसित !
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच जसरी एकताको खिचडी पाक्दै गएको छ त्यति नै मात्रामा नेताहरूको मन भतभती पोल्न थालेको छ । शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थापनलाई राहत दिए पनि केन्द्रमै दोस्रो तहका कैयौँ नेता भूमिकाविहीन बन्ने पक्काजस्तै भएको छ । त्यसो त भूमिका पाएकाहरू पनि नाम मात्रकै भूमिकामा रहने पक्कापक्की नै भएको छ । पार्टी एकतापछि नेतृत्वको जिम्मा लिने नेतालाई शक्तिशाली बनाइनेछ । त्यही भएर दुवै पार्टीका केही शीर्ष नेतालाई सामूहिक नेतृत्व दिने कसरत भएको छ । दुई पार्टी एक भएपछि आफ्नो हैसियत धेरै गिर्ने अनुमान दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले पहिला…
नुवाकोटमा एमालेका नारायण खतिवडा विजयी, हेवीवेट अर्जुननरसिंह केसी साढे १० हजार मतले पराजित
नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नुवाकोटबाट बामगठबन्धनका उम्मेदवार नारायणप्रसाद खतिवडा विजयी भएका छन् । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट बामगठबन्धनकातर्फबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार खतिवडा विजयी भएका हुन् । खतिवडाले नेपाली कांग्रेसका हेवीवेट नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका छन् । खतिवडाले ३६ हजार ८ सय ९२ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी केसीले २६ हजार ३ सय ३५ मत मात्र प्राप्त गरे । यसैगरी सो क्षेत्रको प्रदेशमा पनि बामगठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेश क मा माओवादी केन्द्रका हिरानाथ खतिवडा विजयी हुँदा ख मा एमालेका केशव पाण्डे विजयी भए ।…
यस पटक कांग्रेसका हस्तीहरु बडारिँदैछन्: राधिका तामाङ
डबली खबर २०७४ मंसिर ४ मा प्रकाशित
उम्मेदवार / प्रदेशसभा सदस्य, नुवाकोट क्षेत्र नं. १ (क) चुनावी अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ? हामी निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ । गठबन्धनका सबै गाउँपालिकाको वैठकसहित घरदैलो, भेटघाट र चुनावी कार्यक्रमहरु अन्तिमतिर रहेका छन् । हामी जनतामाझ जाँदा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा मतदाताहरुमा एक किसिमको उत्साह पाएका छौँ । बामशक्ति एक हुँदा अव देशले नयाँ मुहार फेर्ने भयो, देश उन्नतीपथमा लाग्ने भयो भनेर उहाँहरु खुशी हुनुभएको छ । अहिले संयुक्त रुपमा माओवादी र एमाले गठबन्धन बनाएर दुवै पार्टीको संयुक्त एजेण्डा बनाएर चुनावमा जानुभएको छ । मतदताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? यस…
नुवाकोट बाम गठबन्धनको प्रतिवद्धताः प्रत्येक वडामा एम्वुलेन्स
भोलाराज पौडेल । नुवाकोटका बाम गठबन्धनले संयुक्त प्रतिवद्धता पत्र तयार गरी नुवाकोटको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नुवाकोटले अघि सारेको प्रतिवद्धता पत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, विकास र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गठबन्धनले अघि सारेका शैक्षिक विकासका कार्यक्रमहरुमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, दलित, अल्पसंख्यक, गरिव विद्यार्थीका लागि विशेष प्राथमिकता दिइने, हरेक माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर वैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने योजना पनि रहेको…
काङ्ग्रेसले वाम गठबन्धनको भोट लिन भ्रम र पैसाको खोलो बगाएको छ : नारायणप्रसाद खतिवडा
संयुक्त वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार, क्षेत्र नं. २ नुवाकोट नेकपा एमाले नुवाकोटका अध्यक्षसमेत रहेका नारायणप्रसाद खतिवडा अहिले संयुक्त वाम गठबन्धनबाट नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ को प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार रहेका छन् । उनी जिल्लामै बसेर जनताको काम सधैँ गरिरहने नेता भएकाले स्थानीयस्तरमा चिरपरिचित छन् । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जिविस नुवाकोटको उपसभापति हुँदै कावा सभापतिसमेतको जिम्मेवारी उनले सफलताको साथ पूरा गरेका छन् । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि साबिक नुवाकोट क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार भएका खतिवडा झिनो मतले पराजित भएका थिए । मङ्सिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा…
कांग्रेसलाई अर्को झट्का नयाँ शक्तिले भोट नदिने
डबली खबर २०७४ कार्तिक २१ मा प्रकाशित
नुवाकोट । प्रजातान्त्रिक गठवन्धनमा सामेल भएको भनिएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल जिल्ला कार्य समिति नुवाकोटले नेपाली काँग्रेसलाई नसघाउने भएको छ । बाबुराम भट्टराईको लागि गोरखा र प्रेम तामाङको लागि रसुवामा मात्रै नयाँ शक्तिले काँग्रेससंग तालमेल गरेको जनाउँदै नयाँ शक्ति नुवाकोटले आफ्नो भोट आफै लिने जनाएको छ । शुक्रवार विदुरमा सम्पन्न जिल्ला कार्य समितिको बैठकले नयाँ शक्ति आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोग माग्न हिड्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि काँग्रेसलाई समर्थन गर्दै जिल्लाको सबै क्षेत्रमा हालेको उम्मेदवारीलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता लिने र काँग्रेसलाई मतदान गर्न आव्हान गर्ने बताइएको थियो ।…